Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Beeraha oo beeniyay warar sheegayay in uu xilka iska casilay “Dhageyso” – Radio Muqdisho
Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Beeraha oo beeniyay warar sheegayay in uu xilka iska casilay “Dhageyso”
Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Beeraha ee xukuumadda Soomaalyia ayaa been abuur ku tilmaamay warar ay Warbaahinada qaar baahiyeen oo sheegayay in uu iska casilay xilkii Wasiirnimo ee loo Magacaabay.
Xildhibaan Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo ah Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo la haddlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in aanu waxba ka jirin haba yaraatee wararka ay Warbaahinada qaar baahiyen oo sheegayay in uu iska casilay Xilkii Wasiirnimo ee loo magacaabay,
Wasiirka ayaa tilmaamay in uu aad ugu faraxsanyahay Mas’uuliyadda uu u igmaday Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Isla markaana uu ku shaqayn doono.
Mudane Xusen Maxanuud Sheekh Xuseen Wasiirka Beeraha Soomaaliya waxa uu Warbaahinta Wararkaas beehiyay ka dalbaday in ay hubiyaan wararka ay bulshada u gudbinayaan, isagoo xusay in ay muhiimtahay in aan la marin habaabinin bulshada.
Ugu dambayn Wasiirka Beeraha Soomaaliya waxa uu sheegay in uu damacsanyahay in Wasaaradda uu ku soo kordhiyo qorshe badan si loo horumariyo wax soo saarka beeraha oo uu sheegay in muhiimadd wayn ay dalka iyo dadkaba u leedahay.
Hadalka Wasiirka Cusub ee Beeraha Soomaaliya Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa waxa uu imaanayaa xilli xalay waqti dambe uun lagu dhawaaqay Golaha Wasiirada cusub ee Soomaaliya, iyadoo Maantana Warbahinada qaar ay qoreen in uu is casilay Wasiirka hase ahaate Wasiirka uu hadalkaas ku tilmaaamay mid been abuur ah.
Halkan ka dhageyso Wareysi gaar ah oo uu Wasiirku siiyay Radio Muqdisho